Ogaden News Agency (ONA) – Gumaysiga Dhaqaalaha, Dhaqanka iyo Maskaxda
Gumaysiga Dhaqaalaha, Dhaqanka iyo Maskaxda
Gumaysiga Dhaqaalaha, Maskaxda, Dhaqanka – Latin America, Africa, Ethiopia Vs Ogadania
Hordhac:– Harvard Law Professor Noah Feldman’s new book (Cool War: The Future of Global Competition), Professor Edward W Said – Violence and Dignity – Cultural and Imperialism
Frantz Fanon wuxuu noolaa intii udhaxaysay 1925-1961. Wuxuu kadhashay qoys dabaqadda dhexe ah oo daganaa Martinique (Waa jaziirad yar oo kutaala bariga badda Cariibiyaanka oo Faransiisku gumaystay). Markuu 18 jirsaday ayuu lasaftay ciidammadii Faransiiska ahaa ee dagaalkii labaad ee adduunka. Markii dagaalkii lagu kala foodqaaday wuxuu iska dagay Faransiiska oo uu Jaamicadda Lyon kabartay dhakhtarnimada iyo cilmiga maskaxda.
Xilligan wuxuu bilaabay halgan markii hore kadhex bilaabmay naftiisa diirka madow sudhan iyo caddaankan uu dhexjoogo, udagaallamay, kaguursaday waxna kabaranayo ee quudhsiga iyo islawaynida miidhan ah. Wuxuu bilaabay qoraallo siyaasadeed iyo nafsadeed lamahayo cadeyn. Sawir muuqdda, laga soo bilaabo sooyaal taarikheedka dunida ilaa iyo maanta , oo aynu joogno dunidan hormartay, hormar lataaban karro gumaysteyaashii reer galbeedka kusoo kordhiyeen dalalkii ay soo gumeysteen Ingiriiska iyo Taliyaaniga Soomaaliya meel cidlo ah ayay uga tageen.
Kadib 70-sano oo gumeysi qaawan ah, waxay labaduba ka guureen habeen madow iyagoo aan dugsiyo sare, jaamacado, macaahid, warshado iyo khibrad siyaasadeed midna ugatagin dalalkii ay soo wadda gumeysteen. Halganka shacabka Somalida Ogadenia wuxuu lamid yahay ama lagga dugsan karaa, dhacdooyinkii ay soo mareen shacuubtii markaasi ku raad joogtay xoriyad iyo sharaf ay umadax banaanyihiin, isla markaana loo yeedhineynin siday ufikirayaan ama ay uhormarayaan. Fanon wuxuu ka mid ahaa geesiyaashii soo maray dunida, wax badana kusoo kordhiyay halgankii North Africa.
Dadka waxaan oogu dhago nugulahay ruuxii iiga sheekeeya badaha fanka iyo qiimaha ay waddaniyadu leedahay Marka uu qofkaasi I leeyahay: Dadkeennii maxaan uqabannay, maxaynuse uqaban karraa? Ayaan jidhiidhicyoodaa oo qolof wayni iga kacdaa, waxaana tin iyo cidhib isaaqda qiiro iyo qarraacan wadasocda. Marka aanu sheeko dhamaysano ee uu ruuxaasi igatago, waxaan dareemaa raaxo nafsadeed iyo laab furnaan. Waxanan u qalab qaataa wax akhris, wax qoris ama wax qabad.- Waa maxay wadaniyad , sideese loogu beeri karaa geedka wadaniyada. Waa dareen dal iyo dad jacayl ah oo qofka gudihiisa ilaahay ku abuuray.
Dareenkaasi wuu kaxeel dheeryahay xaflado laqabto iyo heeso afka baarkiisa laga qaado. Waa shucuur iyo qiiro aad uqabto dalkaaga iyo deegaankaaga; waa damqasho iyo diirnax aad u hayso dadkaaga iyo duunyadiisa. Waa wel wel iyo walaac kusoo food-saara markastoo aayaha dalkaagu liito. Waa farxad iyo rayn rayn ku saaqda markasta ood aragto dadkaagii oo nabad iyo barwaaqo ku naaloonaya. Waa dareen macaan oo ku hilmaansiinaya dawga qodxaha leh eed dul socoto iyo duruufaha nololeed ee kuguxeeran. Wuxuuna kugu dhalinayaa adigoon ammaan iyo adduunyo midna rabin inaad maalkaaga, muruqaaga iyo maskaxdaada uhurto dadkaaga iyo dalkaaga.
Wuxuu sidhow ufahmay nafsiyadda caddaanka gumaystaha ah iyo ta la gumaystaha dulmanaha ah. Wuxuu qoray maqaallo taxane ah oo uu ubixiyey “Quudhsiga Madowga” markii danbese noqday buuggiisii u horeeyey ee labaxay “Peau Noire, Masques Blancs (Dub madow, Qafis Cad)”. In kastoo uu wakhti aan badnayd kusoo laabtay meeshii uu kudhashay markuu waxbarashada soo dhammaystay kadib, haddana marnaba ma dareemin nasasho iyo deganaan toona. Wuxuu urixlaystay Aljeeriya oo kashaqo galay hosbitaal kuyaallay Aljeeriya. Halkaa wuxuu kabilaabay halgan horleh. Waa halgankii gumaystaha Farasiiska lagaga xoreeyay Aljeeriya.
Fanon mudadaa yar ee uu noolaa wuxuu katagay dhaxal dufankiisu ilaa maanta sii qoyanyahay. Wuxuu dhidibada u aasay fahanka nafsiyadda gumaystaha iyo la gumaystaha. Wuxuu ahaa halgamaa, dhakhtar, filasoofar iyo aragtiyahan hodmiyay fahanka nafsiyadda gumaystaha iyo gumeysi diidka dadka madow.
La soco Q/ kalle oo joogta ah Inshaa Allah
Qore/Mujahid Sheekh Ibrahim
Waa qoraal ku dayasho mudan. Jakaa Allahu Mujaahid.